Etu igwe mmụta na akụrụngwa ga-esi azụ ahịa gị | Martech Zone
N'oge mgbanwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe ụmụ mmadụ mere dị ka akụkụ nke igwe, guzo n'akụkụ usoro mgbakọ, na-anwa ime onwe ha ọrụ dị ka igwe dị ka o kwere mee. Dika anyi banyere na nke a na akpọ ugbu a “4th Industrial mgbanwe”Anyị amatala na igwe dị mma karịa ịkpụzi mmadụ.
N'ime ụwa nke mgbasa ozi ọchụchọ, ebe ndị njikwa mkpọsa na-edozi oge ha n'etiti iwulite ihe okike, na ijikwa ma na-emelite ha kwa ụbọchị, anyị na-etinye oge ka ukwuu n'ime oge anyị na-arụ ọrụ nke nwere ezi uche maka igwe.
Otu ọgbọ gara aga, anyị mere mgbanwe site n'ichepụta ihe na akụ na ụba ọrụ. Ngbanwe a gbanwere ụdị ndị ọrụ - na ịzụ ahịa n'ọtụtụ ọnọdụ nyeere aka na mgbanwe ahụ. Ugbu a, ọzọ ọrụ nke marketer na-agbanwe, na nke a, a na-ebuli ya elu.
Ọtụtụ ndị ahịa na-eche echiche n'ihu na-enwe obi ụtọ banyere mgbanwe a, mgbe anyị nwere ike ilekwasị anya na ihe anyị kachasị mma - na - echepụta - ebe igwe ga-abanye ma mee ihe ha kacha mma - nyochaa ọtụtụ data iji jiri akọ wee mata ma jiri usoro.
Nnukwu data na mmụta igwe, bụ ihe mmalite bidoro oge ọhụụ na-atọ ụtọ nke ga-enyere ndị ụdị aka ikwurita ndị ahịa site na ọwa dijitalụ ọhụụ n'ụzọ dị nro karịa iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Ranee Soundara n'ihi na ọkara.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ka na-ala azụ ịnakwere teknụzụ ahịa ọhụụ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-amalite ịghọta na mmụta igwe bụ ihe dị mkpa maka mkpọsa arụmọrụ dị elu na nsonaazụ siri ike, ihe na-esote bụ ịchọta azịza ziri ezi.
Etu esi muta igwe na aru oru na ahia ahia
Na 2014, ntinye ego itinye ego na mmalite ọgụgụ isi ọgụgụ isi, gụnyere mmụta igwe, mmụta miri emi, na amụma nchịkọta amụbawo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu asaa, site na $ 45M na 2010 ruo $ 310M na 2015 dị ka CBI nyocha.
Ka itinye ego na AI na mmụta igwe na-aga n'ihu na-enwe ume n'ihi "4th Industrial Revolution," ebe ikike nke ụlọ ọrụ agbanweela otu a. Ndị isi ọrụ na-arụ ọrụ ugbu a maka mmefu ego na nsonaazụ nke teknụzụ ọhụụ. Dị ka Gartner Research ama buru amụma, site na 2017, CMOs ga-etinye ihe na IT karịa ibe ha CIO.
Ngbanwe a na-eme n'ihi na ndị ahịa na-abanye na tsunami nke data. Ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ nke ọrụ a nke igwu ala site na nchịkọta nke datasets ndị a na-ahazighị edozi iji nwalee ma ghọta nnukwu foto agaghị ekwe omume iji data 130 nke data na-aga n'ihu na mbara igwe dijitalụ (nke ahụ bụ 18 efu maka anyị ndị nkịtị). Aremụ mmadụ nwere ike ịhazi ọtụtụ terabytes 1000 (ihe efu iri na abụọ), anyị na-ahazi nọmba nwayọ nwayọ, yana ihe anyị na-akpọ njehie mmadụ. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, nke a metụtara ikekwe karịa ịchọ ahịa na akụrụngwa akpaaka dịka ọ na-eme n'akụkụ ọ bụla ahịa ahịa.
N'ihe banyere izi ezi na ịrụ ọrụ, mmụta igwe na-egwu na bọlbụ dị iche iche, ndị ahịa ahụ niile ka na-agba ọsọ na obere egwuregwu ga-esiri ya ike ịnọgide na-asọmpi ka ndị asọmpi ha na-amụba igwe na-amụba algorithms ugboro ugboro.
Gịnị bụ Ngwaọrụ Ngwaọrụ, Kpọmkwem?
Igwe ihe omuma bu ihe buru ibu nke nwere otutu uzo na ngwa, ma a na-ejikarị ya edozi nsogbu site na ichota usoro nke anyi na - apughi ihu onwe anyi, dika ihe omuma.
Dịka ọmụmaatụ, ire ahịa mgbasa ozi bụ ebe dị egwu, ebe ndị ahịa na-amaghị ebe ha ga-esi tinye ọnụ ahịa, otu esi eme mgbanwe maka mkpanaka, yana n'ikpeazụ otu esi enweta ọtụtụ mgbanwe maka obere ego ga-ekwe omume. N'elu nke ahụ, enweghị oge iji tinye mkpọsa ọ bụla iji hụ na ọ na-eme ka arụmọrụ ya dị ukwuu karịa ikike ya. N'iji nkuzi igwe, AdWords na ndị na-ere ahịa nke atọ na-enye azịza teknụzụ nke na-agbaso mgbasa ozi mgbasa ozi ahụ, ma mụta otu esi emelite ma gbanwee ọnụahịa na-akpaghị aka site na iji data akụkọ ihe mere eme iji kwuo ihe kacha mma iji dozie dabere na mmefu ego, akara ogo, asọmpi, na mgbanwe na mmụba n'oge nke ụbọchị.
Oldzọ ochie nke ijikwa mgbasa ozi mgbasa ozi na-echetara m ihe omume Simpsons ochie mgbe Homer Simpson setịpụrụ nnụnụ na-a drinkingụ mmanya iji rụọ ọrụ ya maka ya. Na nke a, igwe mmụta algọridim anaghị pịa igodo “Y” ugboro ugboro, ha na-agbanwe mgbe niile site na iji ozi anakọtara wee rụọ ọrụ iji melite arụmọrụ karịa ihe ụmụ mmadụ nwere ike.
Can nwere ike ịhapụ ọrụ ndị ahụ kwa ụbọchị ma lekwasị anya n'ịburu ndị ahịa ọhụrụ, ịmepụta ihe okike, na melite arụmọrụ na ụzọ mmadụ.
Nnụnụ abụọ nwere Otu Nkume
Nsogbu ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eche ihu mgbe ha na-agba mkpọsa ọchụchọ bụ okpukpu abụọ, enweghị oge ma ọ bụ aka mmadụ ga-anọdụ ala ebe ahụ wee dozie ọnụ ahịa na mmefu ego maka akaụntụ na mkpọsa niile (nke na-ebelata ikike ịbawanye elu), na nke abụọ, ndị na-ere ahịa na-agba mbọ iji nweta Nsonaazụ ka ukwuu na ahịa na-asọmpi na-arịwanye elu.
Na nkenke, ndị mmadụ chọrọ ime ihe ngwa ngwa, nke ka mma ma dị mfe, naanị otu ụzọ isi mee nke ahụ bụ inyefe ya na igwe ndị ahụ.
Acquisio na-enye ihe anyị kwenyere na ọ bụ azịza pụrụ iche maka ahịa ọchụchọ, nke na-enye ndị ahịa ohere ilekwasị anya oge ha na atụmatụ ndị ọzọ na-arụpụta ihe ma na-arụ ọrụ nke ọma ka ha na-etinye ego itinye ego na ntinye igwe dị elu. jikwaa ego akwụ ụgwọ na usoro mmefu ego. Nsonaazụ bụ nnukwu mmụba karịa ọ bụghị naanị na arụpụtaghị ihe, kamakwa na arụmọrụ mkpọsa. A na-akpọ ya Ikele na usoro mmefu ego (BBM).
Ngwa igwe anyị ji amụ ihe, ikike ịkwụ ụgwọ na njikwa ego algorithm bụ naanị ụdị azụmaahịa dị elu maka AdWords na Bing, na-agbanwe ego na mmefu ego ozugbo ndị mbipụta akwụkwọ emelitere ma na-ebu amụma ihe mbubata ọzọ ga-abụ - nke anyị nwere ike gosi draịva mma mkpọsa arụmọrụ karịa ndị ọzọ na amụma algorithms. Onye isi, Marc Poirier na Acquisio.
Kedu otu bidoro na mmefu ego (BBM) si arụ ọrụ
Dị nnọọ ka ụgbọ ala na-anya ụgbọ ala nwere ike ịmata ma usoro ọkwọ ụgbọ ala na omume n'oge ahụ, ma gbanwee ya na gburugburu ya n'okporo ụzọ, BBM na-ama mgbe niile banyere gburugburu ebe obibi ahụ, na-edozi ọtụtụ nde ngụkọta na mgbanwe ndị metụtara mgbanwe na auction. , oge nke ụbọchị na ndị ọzọ, iji mee ka mkpọsa gị na-aga nke ọma. Nke a na - arụ ọrụ mgbasa ozi kachasị mma, niile mgbe ị na-anọdụ ala azụ ma hapụ ka algorithms na-akwọ gị.
N'ụlọ ahịa PPC, ọ bụrụ na ịtọọ ego, nke ị chere na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, wee hapụ ya, mgbanwe oge niile na ọnụ ahịa ụbọchị niile pụtara na ị nwere ike ịlaghachi na akaụntụ gị echi ma nwee nkụda mmụọ na nsonaazụ. Nke ka njọ bụ na o yikarịrị ka ị ga-akwụ ụgwọ maka ụfọdụ ịpị aka, ma ndị ọzọ efunahụ gị.
Ọtụtụ algọridim na-agbanwe agbanwe na-akwụ ụgwọ dị ka obere oge dị ka elekere, kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu. Site na ịkọ na ịhazi na-ekwe ọnụ kwa nkeji 30, Acquisio na-ekere òkè na ọnụ ahịa karịa mgbe ọ bụla ihe ngwọta njikarịcha ọ bụla, ma na-eme mgbanwe ndị ziri ezi. Nke a na - enyere aka ịkwanye CPC / CPA wee pịa ma gbanwee.
N'ezie, a na-egosi na azịza anyị belata ọnụ ala kwa clicks site na nkezi 40%, mgbe ị na-elele ihe karịrị akaụntụ 20,000 kwadoro na otu ọnwa site n'aka Acquisio. Na, na algọridim na-agba ọsọ iji mezuo mmefu ego na ụbọchị zuru ezu na ọnwa dum, ihe ndekọ iji BBM nwere ike karịa 3x iji bulie mmefu ego zuru oke na-enweghị oke.
Ma ọ bụrụ na oge echekwara, nkewa nke WSI - nke na-etu ọnụ otu netwọkụ ahịa ịre ahịa dijitalụ kachasị n'ụwa - enwere ike iwepụ awa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụbọchị, site na usoro njikwa usoro mgbasa ozi ha na-eji BBM.
Anyị zọpụtara oge dị ukwuu site na akpaaka anyị nwere ike ịgbanwe lekwasị anya n'ịdị mma nke mkpọsa anyị. Heitor Siviero, Onye Nchịkọta Ọrụ na WSI Brazil.
Site na ndị ahịa na-elekwasị anya na imeziwanye mkpọsa mgbasa ozi, yana algorithms mmụta mmụta igwe na-agba ọsọ kwa ụbọchị iji melite arụmọrụ, ndị ahịa na-ahụkarị ihe anyị na-akpọ, "x-grafụ," ebe enwere akara ngosi na clicks na dobe na CPC na-agbatị mgbe anyị mechara igwe anyị mmụta algorithms. .
Site na nsonaazụ ndị a, ọ dị mfe maka azụmaahịa iji dọta ndị ahịa ọhụrụ, yana oge echekwara na ọrụ njikwa mkpọsa akwụkwọ ntuziaka, ha nọ n'ọnọdụ ka mma iburu ndị ahịa ọhụụ ma bulie arụmọrụ ha ebe ha dị mkpa: atụmatụ, okike na igbu.
Ihe dị mkpa bụ, teknụzụ anyị na-enye anyị ohere iwepụta arụmọrụ mkpọsa dị iche iche maka ọbụlagodi akụkọ siri ike ịkwalite, gụnyere ndị nwere obere olu ma ọ bụ obere ego, ihe ịma aka na-adịghị ala ala maka onye ọ bụla na-achịkwa mkpọsa ọchụchọ maka obere azụmaahịa.
Mee Nzọụkwụ Ọzọ
Ma ị bụ akụkụ nke obere azụmaahịa mpaghara ma ọ bụ Fortune 500, oge eruola ka ị nabata afọ agụmakwụkwọ maka ịzụ ahịa ọchụchọ.
Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị ịmụtakwu maka otu esi azịza anyị na nhazi mmefu ego na-arụ ọrụ:
Lelee Webinar Hazie Ihe ngosi Onwe Onye
Tags: 4th mgbanwe ụlọ ọrụAcquisiookushonAdWordsalgọridimAmamịghe echichebbmikele na njikwa egobidoro dataiwu iwuBloombergcb nghọtaihe omumagartner nyochahomer simpsonmgbanwe mmepụta iheọ bụ ciongwa igweMarc Poirierakwụ ụgwọ ọchụchọakwụ ụgwọ ọchụchọ akwụ ụgwọranee soundaranyocha ọnụNkechiwsi Brazil